आवश्यक: युरोपियन युनियनका लागि आगन्तुकहरूको लागि स्वास्थ्य बीमा
घर » भर्खरका समाचार लेखहरू » ब्रेकि International अन्तर्राष्ट्रिय समाचार » अन्डोरा ब्रेकिंग न्यूज » आवश्यक: युरोपियन युनियनका लागि आगन्तुकहरूको लागि स्वास्थ्य बीमा
अन्डोरा ब्रेकिंग न्यूज • अस्ट्रिया ब्रेकिंग न्यूज • बेल्जियम ब्रेकिंग न्यूज • बुल्गेरिया ब्रेकिंग न्यूज • क्रोएशिया ब्रेकिंग न्यूज • चेकिया ब्रेकिंग न्यूज • डेनमार्क ब्रेकिंग न्यूज • फिनल्याण्ड ताजा खबर • फ्रान्स ब्रेकिंग न्यूज • जर्मनी ब्रेकिंग न्यूज • हंगेरी ब्रेकिंग न्यूज • इटाली ब्रेकिंग न्यूज • Liechtenstein ताजा खबर • लक्जमबर्ग ताजा समाचार • माल्टा ब्रेकिंग न्यूज • मोनाको ब्रेकिंग न्यूज • नेदरल्याण्ड्स ब्रेकिंग न्यूज • समाचार • नर्वे ब्रेकिंग न्यूज • पोल्याण्ड ब्रेकिंग न्यूज • स्लोभेनिया ब्रेकिंग न्यूज • स्विट्जरल्याण्ड ताजा खबर • पर्यटन
25 सक्छ, 2017
के तपाई एक देशका नागरिक हुनुहुन्छ जुन EU लाई प्रवेशका लागि भिसा लिन आवश्यक छ? भिसा ती नागरिकहरु लाई पनि आवश्यक छ यदि तिनीहरू संयुक्त राज्य अमेरिका वा क्यानाडा जस्ता देशहरुमा बसोबास गर्छन्। के तपाई युरोप बाहिरका कुनै पनि देशको नागरिक हुनुहुन्छ कि रोजगार असाइनमेन्ट वा फुर्सदको लागि युरोपमा विस्तारित योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ?
यदि तपाईंको उत्तर हो हो भने तपाईंले ओबामा केयर वा सबैको लागि स्वास्थ्य हेरचाह सम्झन सक्नुहुन्छ। युरोपमा, नागरिकहरूलाई स्वास्थ्य बीमाको मात्र आवश्यकता पर्दैन, तर आगन्तुकहरूलाई पनि। अपवाद भनेको नागरिकबाट छोटो समय भ्रमण हो जुन ईजामा भिसा बिना प्रवेश गर्न सक्दछ। वाणिज्य दूतावासहरूलाई Schengen क्षेत्र को लागी एक भिसा वैध जारी गर्न को लागी, स्वास्थ्य कभरेज को एक प्रमाण आवश्यक छ।
ईयु देशका कन्सुन्सले शेंगेन क्षेत्रका लागि भिसा वैध जारी गर्नका लागि स्वास्थ्य कभरेजको प्रमाण आवश्यक छ।
के तपाईंलाई थाहा हुनु पर्छ बीमा खरीद गर्दा।
बीमा सबै EU र Schengen देशहरुमा मान्य हुनु पर्छ
बीमा ले तपाईंको सम्पूर्ण बसाई अवधि समाहित गर्नुपर्दछ, यदि केवल ट्रान्जिटिंग भए पनि
तपाईंको बीमाको लागि न्यूनतम रकम EIRP 30,000.00 हुनुपर्दछ
प्रत्येक ईयू देशको पनि विशिष्ट राष्ट्रिय नियमहरू छन् तपाईंले जाँच गर्नु पर्छ।
उदाहरण को लागी, जर्मनी मा, तपाईको बीमाले सबै अस्पताल लागतहरुका १००% लाई कभर गर्नु पर्छ, पर्दैन यदि तपाई बाह्य रोगी प्रक्रिया गर्नुहुन्छ वा भर्ना हुनुभयो भने। यो समावेश गर्नु पर्छ यदि तपाईं एक विशेषज्ञ द्वारा देख्नु पर्छ। कुनै पनि बीमाको लागि जेब लागत बाहिर 100००० यूरो भन्दा बढी हुन सक्दैन।
यदि तपाईंलाई तपाईंको गन्तव्य देशमा प्रारम्भिक प्रवेशको लागि भिसा आवश्यक पर्दैन भने, तपाईंले पछि आउनु भएको 31१ दिन पछि तपाईंलाई बिमाको प्रमाणहरू प्रदान गर्नु आवश्यक पर्दछ। अधिकारीहरू यसलाई जाँच गर्न राम्रो प्रशिक्षण दिएका छन्। कूटनीतिज्ञहरुलाई छुट छ।
यो सजिलो र छिटो हो यस्तो बीमा खरीद गर्न.
विज्ञहरूले जस्तै बीमालाई सम्पर्क गर्न सिफारिस गर्छन् BDAE समूह, किनकि यो समूहको यस क्षेत्र मा वर्षौंको अनुभव छ।
यसले यो बुझ्दछ र गैर ईयू नागरिकका लागि परिवारका सदस्यहरूलाई पनि सुनिश्चित गर्न आवश्यक पर्दछ। यी दिनहरुमा स्वास्थ्य सेवा धेरै महँगो हुन सक्छ।
Expat visit उदाहरणको लागि भ्रमण गर्नुहोस्, केवल प्रति दिन EUR 1.10 को लागि पूर्ण कभरेज प्रस्ताव गर्दै।
थप जानकारी जर्मनीमा विदेशीहरूको लागि स्वास्थ्य बीमा .